Ciidamada dowladda Soomaaliya oo sargaal sare oo Al-Shabaab katirsanaa ku dilay gudaha gobolka Gedo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowladda Soomaaliya oo sargaal sare oo Al-Shabaab katirsanaa ku dilay gudaha gobolka Gedo
January 29, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo sargaal sare oo Al-Shabaab katirsanaa ku dilay gudaha gobolka Gedo. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gedo ayaa dilay sargaal sare oo Al-Shabaab katirsan, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Waxaa la dhihi jirey sargaalka la dilay Cabdullaahi Khannaas kaasoo ahaa hoggaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka Gedo.
Dilka ayaa ka dhacay xalay oo Axad ahayd gudaha Tuulada Tuulo-barwaaqo kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen kolonyo maleeshiyo Al-Shabaab ah kuwaasoo ku sii jeeday xero tababar oo halkaas kutaala, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan.
Tuulo-barwaaqo ayaa qiyaastii 18 km u jirta magaalada Garbaahrey, ee xarunta gobolka Gedo.
Intii lagu guda jirey sanadadii u dambeeyay ee lasoo dhaafay, saraakiil sare oo Al-Shabaab katirsanaa ayaa lagu dilay duqeyn ee geysteen Mareykanku iyo weeraro ay qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya.